Waftigii Soomaliya Iyo Kulankii Saaka. - Cakaara News
Waftigii Soomaliya Iyo Kulankii Saaka.
Jigjiga(cakaaranew) khamiis, 11ka August, 2016, Waftigii uu hogaaminayay madaxwaynaha jamuuriyada soomaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu horkacayo madaxwaynah DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka kulan la yeeshay masuuliyiint xukuumada DDSI, odayaasha dhaqanka deegaanka iyo shaqaalaha xafiisyada heer deegaan.
Kulankaasi oo ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ugu horayntii ka hadlay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo sharax dheerka bixiyay farqiga u dhexeeya dawladihii hore itoobiya iyo soomaliya iyo waliba dawlaha maanta itoobiyada cusub iyo soomaliyada cusub. Madaxwaynaha Ayaa si qoto dheer uga warbixiyay soonyaalkii taariikheed iyo dhibaatooyinkii soo daashaday shacabka DDSI iyo kuwa somaliya iyo colaadihii ay kala dhaxdhigeen dawladihii hore ee wadamada soo maamuli jiray. madaxwaynaha ayaa tilmaan dheer ka bixiyya tabihii iyo xeeladihii lagaga soo baxay dhibaatooyinkii iyo cadaadiskii soo daashaday qoomiyadaha iyo shucuubta dalka itoobiya iyo sida ay hada uga wada faa’iidaystaan qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya neecoowda horumarineed ee ka dhalatay itoobiyada cusub. Madaxwaynah ayaa sheegay in ay taageero dhinac kasta leh la garab taagan yihii dawlada soomaliyda ee ay walaalaha yihiin kana wada shaqaynayaan sii xoojinta xidhiidhka wanaagsan ee hada ka dhexeeya
Madaxwaynaha jamuuriyada soomaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay kulankaasi ayaa ugu horayntii si qoto dheer ugu mahadnaqay xukuumada DDSI iyo shacabka DDSI sida meeqaamka sare ee loogu soo dhaweeyay deegaanka. Madaxwaynaha ayaa sheegay in ay soo jiidatay horumarka baaxada wayn ee ka hirgalay deegaanka. wuxuuna sheegay Madaxwaynuhu in dawlada somaliyada iyo deegaanada dalka itoobiya kaga dayanayaan DDSI jihooyinka iyo istaraatajiyadaha ay ku hanteen horumarka deg dega ah iyo xasiloonida deegaan taasi oo soo jiidatay ayuu yidhi indhaha caalamka iyo kuwa geeska Africa. madaxwaynaha somaliyada ayaa sheegay in furaha horumarku yahay nabadgalyada wuxuuna tilmaayay in ay ujeedada socdaalkoodu tahay in ay aqoon ka korodh sadaan DDSI wuxuuna ka warbixiyay intii uu joogay deegaanka waxa ay ku arkeen gaar ahaam mashaariicaha horumarineed ee iyo kuliyadaha waxbarashada oo ay soo kormeereen. Madaxwaynaha somaliyda ayaa ka warbixiyya xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya dawlaha soomaliya iyo itoobiya iyo taageerooyinka ay markasta lagarab taagan tahay dawlad itoobiya walaalahooda somaliyda.
Dhankooda qaarka mid ah odayaal dhaqameedka DDSI oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin soona dhawayna yaan waftigan uu hogaaminaya madaxwaynaha somaliya. waxayna si qoto dheer uga warameen sida ay u wada shaqeeyaan xukuumada DDSI iyo odayaasha dhaqanka deegaanka.